EZRA 4.1-24 F. 2, 5 | Fitandremana Ankadifotsy
EZRA 4.1-24 F. 2, 5
NY TAHOTRA SY NY FIANTRAIKANY
Sarotra ny fifandraisana (1-6). Rehefa avy nandao ireo Zanak’Israely izay tao anatin’ny alahelo sy ny hafaliana isika, dia miditra ao anaty fihetseham-po hafa : tahotra. Hitantsika eto amin’ity toko ity fa rehefa tsy hatrehana izy io dia manimba fifandraisana. Voalazan’ny mpanoratra fa « fahavalon’ny Joda sy ny Benjamina » ireo mponina tao Samaria. Kanefa rehefa tohizana ny vakiteny, dia mahatsikaritra isika fa mpifahavalo ny roa tonta, satria nilaza ny Zanak’Israely fa tsy te hifampiraharaha na amin’inona na amin’inona amin’izy ireo. Tahotra no tsapa misy amin’ny andaniny sy ankilany.
Ny fanedrikendrehana (7-16). Toa tsy nisy toerana ho an’ny fifankahalalana teo amin’ireto mponina roa tonta. Iray toeram-ponenana izy ireo, saingy samy tsy te hiatrika izay zava-misy izay. Nanoratra ho an’ny mpanjaka nanendrikendrika nyZanak’Israely no nataon’ireto Samaritana. Tsy nilaza ny ahiahiny momba izay ho fiantraikany ho azy izy ireo, fa nilaza kosa izay mety ho fiantraikany ratsy ho an’ny mpanjaka noho ny fisian’ireto olona vao tonga, ary toa natao izay hitondrana ny mpanjaka hanao hetsika manokana.
Tandremana ny mihaino feo tokana (17-24). Rehefa naharay ny taratasy ny mpanjaka dia nampanao fikarohana tokoa, saingy noho ny fampitahorana tao anatin’ilay taratasy, dia nijanona fotsiny teo amin’izay fikarohana voalaza fa tsy nandeha lavitra. Hitantsika ny fiantraikany, fa dia niafara tamin’ny fandrarana ny fanohizana ny fanorenana ny tempoly izany.
Fampitandremana : Tsara ny miatrika ny fihetseham-ponao ndrao izy indray no hibaiko anao. Im-betsaka no averin’Andriamanitra ny teniny hoe “Aza matahotra !”